Xiisadda Forex | Waa maxay Isku Beddelka iyo Qiimaynta Qiimaha? FXCC
Xiisadda Forex ayaa sharraxday
Qalitaanka, marka laga eego shuruudaha ganacsiga, waxaa ugu wanaagsan in lagu sharxo sida haysashada amar buuxis ah qiimaha kala duwan ee qiimaha marka hore laga soo xigtay suuqa. Si kastaba ha noqotee, laydhka waa in loo tixgeliyaa inuu yahay calaamad wanaagsan oo ah in suuqa iyo ganacsadaha ay doorteen suuqyada la doorto, ay ku shaqeeyaan qaab sahlan oo hufan.
Ganacsadayaashu waxay la kulmi karaan amaradooda saddexda siyaabood ee suurtogalka ah; qiimaha rasmiga ah ee la soo xigtay, khibrad xumo - taas oo amarkooda ay ku buuxsamaan qiimo aan ku helin raalli ahaansho, ama ay soo mareen khibrad wanaagsan - marka amarku ka buuxsamo qiimo ka fiican qiimaha asal ahaan laga soo xigtay. Xaqiiqada ah in xayndaabku jiro waa in loo arkaa inay tahay mid xoojinaysa in ganacsadaha uu ku hawlan yahay meel sarreeya oo caddaalad ah oo sahlan. Si gaar ah marka la eego ECN si toos ah iyada oo loo marayo processing, waxay xaqiiq ahaan noqon doontaa mid aan caadi ahayn oo run ahaantii laga shakiyo, haddii amarrada ganacsatada ay had iyo jeer ka buuxsamay qiimaha rasmiga ah.
Suuqan oo kale sida FX, oo leexiyo $ 5 trillion kasta oo isbuuc kasta ah iyo dilida boqollaal malyan oo ganacsi maalintii, waa dhacdo dabiici ah iyo rajo macquul ah oo aan dhammaan amarrada laga yaabo inay si fiican ugu habboonaadaan jawiga caynkaas ah. Goob ganacsi oo caddaalad ah oo hufan, biilasha bixiyeyaasha xisaabta waxay bixiyaan quudarrada FX, isbedelku si kedis ah ayuu u baddali karaa oo si qumman. Sidaa daraadeed, amarku waa mid si toos ah ugu habboon qiimaha ugu macquulsan ee la heli karo, marmarka qaarkood qiimaha la soo xigtay, ama laga yaabo inuu qiime ka fiicnaado intii la filayay.
Waa maxay kaftamidda wanaagsan?
Xayeysiin wanaagsan ayaa sidoo kale loo yaqaan hagaajinta qiimaha oo waa dhacdo halka qiimaha jaban uu ka shaqeeyo ganacsadaha.
Tusaale ahaan, ganacsade ayaa amar ku bixiyay in BUY 1 badan oo EUR / USD ah lagu iibiyo qiimaha suuqa 1.35050, amarka waxaa loo direy mareegta MetaTrader si loo helo bixiyaha dammaanadda kadibna farriinta xaqiijinta ayaa dib u soo sheegaysa ganacsadeha in amarka lagu toogtay 1.35045. Iyadoo loo marayo qaabka ECN / STP ganacsade ayaa la kulmay leexashooyin wanaagsan, waxay ka buuxsameen qiimo ka fiican, qiimo aad u fiican oo ay u leeyihiin amarkooda hore.